OnTheHub®မှတဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းသားများအတွက် Maxon One subscription ကိုအခုရရှိနိုင်ပါပြီ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » OnTheHub®မှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောင်းသားများအတွက် Maxon One subscription ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Friedrichsdorf, ဂျာမနီ - စက်တင်ဘာလ 28, 2020 - ယနေ့၊ Maxon လုပ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ် Maxon တစ်ခုမှာပညာရေးဆိုင်ရာဆော့ဝဲလ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ထိပ်တန်းရောင်းချသူမှစွမ်းရည်ရှိသောကျောင်းသားအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းအသစ်မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးသည့်ကိရိယာများကို၎င်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရည်အချင်းပြည့်မီသောကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများကိုယခုအခါရရှိနိုင်ပါသည် Maxon တစ်ခုမှတစ်ခု OnTheHub®.
"ပေး Maxon ကျောင်းသူ / သားများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်နည်းသောကြောင့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ David McGavran ကပြောကြားခဲ့သည် Maxon စီအီးအို။ Kivuto နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုတတ်နိုင်ပြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အခုဆိုရင်ကျောင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Professional 3D, VFX, motion graphics နဲ့ compositing tools တွေကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီနိုင်ပြီ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ထုတ်လုပ်မှုနောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုမှာသူတို့အတွက်လုံလောက်စွာပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ”
Maxon တစ်ခုမှာ အားလုံးအတွက်အသစ်တစ်ခုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစုအဝေးသည် Maxonအားလုံးပါဝင်သောအထုပ်တစ်ခုထဲတွင်ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။
ရုပ်ရှင်ရုံ 4D: သင်ယူရလွယ်ကူပြီးအလွန်အစွမ်းထက်သော Cinema 4D သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာရရှိလိုသော 3D အနုပညာရှင်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ အစပြုသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်သူများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာရရှိရန် Cinema 4D ၏ကျယ်ပြန့်သောကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ Cinema 4D ၏ဒဏ္reliabilityာရီအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကြောင့်၎င်းသည်လိုအပ်သောမြန်ဆန်သော 3D ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်။
Redshift (C4D အတွက်): Redshift သည် C4D ရှိခေတ်မီအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တည်ဆောက်ထားသည့်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးအပြည့်အဝ GPU-accelerated, ဘက်လိုက်မှုပြန်လုပ်ပေးသူဖြစ်သည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စတူဒီယိုတိုင်းကိုထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်၍ Redshift သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့် ၀ သောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးပြန်ဆိုခြင်းအတွက်လိုအပ်သည့်အတိုင်းရှုပ်ထွေးပြီးအဆင့်မြင့်အရိပ်များကွန်ယက်များနှင့်စာသားစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့သည်။ Redshift တွင် CPU rendererer ၏အရည်အသွေးနှင့်အလျှော့မပေးသောအရည်အသွေးများရှိသော်လည်း GPU rendering speeds တွင်ရှိသည်။
အနီရောင်iantရာပြည့်စုံ: တည်းဖြတ်ခြင်း၊ VFX နှင့်လှုပ်ရှားမှုဒီဇိုင်းအတွက် Red Giant ကိရိယာများ၏အစုံတစ်ခုလုံးကိုရယူပါ။ Red Giant အပြည့်အဝတွင် Universe, Trapcode Suite, Magic Bullet Suite နှင့် VFX Suite တို့ပါဝင်သည်။ သင် 3D အမှုန်စနစ်များနှင့်အရည်ဒိုင်းနမစ်၊ အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ရုပ်အသွင်အပြင်၊ အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများသည် ၆ လသက်တမ်းတိုးနိုင်သောလိုင်စင်ကိုရရှိနိုင်သည် Maxon တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၉၉ / ယူရို ၂.၇၅ (စျေးနှုန်းသည်ဒေသ၊ ငွေကြေး၊ VAT) အရကွဲပြားနိုင်သည် Maxon တစ်ခုမှာပညာရေးလိုင်စင်ကနေချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည် Kivuto ရဲ့OnTheHub®.
OnTheHub သည်ကီဗူတိုအမှတ်တံဆိပ်သည်ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများကိုကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း software နှင့်ဒီဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီများမှအခမဲ့နှင့်အလွန်အမင်းလျှော့ချထားသောဆော့ဖ်ဝဲများဖြင့်ပညာရေးအတွက်အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယနေ့ OnTheHub သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်တွင်ရှိပြီးကျောင်းအမှတ်တံဆိပ်ဝက်ဘ်စတိုးတွင် ၂၀,၀၀၀ ကျော်တွင်ရှိသည်။ onthehub.com/
Maxon ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 2D / 3D ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုပြုစုသူဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် Maxon နှင့် အနီရောင်ဧရာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းစည်းမှုကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီ၏ဆုရ ရုပ်ရှင်ရုံ 4D, Redshift 3D နှင့် အနီရောင်ဧရာ ထုတ်ကုန်များသည်ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗီရှိုးများနှင့်ကြော်ငြာများ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများမှ AAA ဂိမ်းများအတွက်ကစားနည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသရုပ်ဖော်ပုံ၊ ဗိသုကာဒီဇိုင်းနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းများမှအရာအားလုံးကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဆပ်ရန်ကူညီသည်။ Maxon ထုတ်ကုန်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်မှတိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သည်။ Maxon ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Nemetschek အုပ်စု.
MAXON Maxon တစ်ခုမှာ 2020-09-28
ယခင်: Ooyala Flex မီဒီယာပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးသတင်းများသည် Cloud ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်သည်
နောက်တစ်ခု: TSL ထုတ်ကုန်များသည် Broadcast Control Solutions အတွက် Connectivity Solutions ကိုအာရုံစိုက်သည်